Iimakhishithi zentsimbi ezihonjisiweyo ezingenasici - China izinto zokuhombisa ezenziwe ngentsimbi eshishini, abaxhasi
IBakala: 304 304L 304DQ 316 316L 201 202
Iimakhishithi zensimbi ezingenasici ziveliswa kwinani elikhulu lamabanga akumgangatho axhomekeke ekusebenziseni imveliso. Isitokhwe esikhulu siyafumaneka kumanqanaba ahlukeneyo esinyithi. I-1.4031 / 1.4037 (304 / 304L) zezona zixhaphake kakhulu kwaye zisetyenziswa kakhulu kwibakala lensimbi kumashiti e-stainless steel. Iifayile zeSinyithi ezingenasici nazo zenziwe ngeendlela ezahlukeneyo zokugqiba ngenxa yenani labo elikhulu lokukhetha izicelo. Ezinye izinto ezigqityiweyo eziqhelekileyo ezaziwayo kwimarike zii-2B, # 3 ipolishi yentsimbi engenasici, # 4 iishiti zensimbi ezingenanto kunye ne # 8 Mirror Finish. Isiphelo esona siqhelekileyo sisetyenzisiweyo samashiti e-stainless steel # 4.